China Multi-tanjona phosphate coating IC-R03 orinasa sy ny mpanamboatra | Love Olona novana
IC-R03 menaka Esory antirust no ranon-javatra atao amin'ny harafesina remover sy ny sarimihetsika-namorona fitaovana, dia afaka manafoana manala menaka amim-pahombiazana haingana sy mamorona ny harafesina sosona ny vy ambonin'ny, film miaraka ambonin'ny manana fitaovana fiarovana harafesina tsara vokany.
Product Description sy ny Mahatsara
1, IC-R03 menaka Esory antirust no ranon-javatra atao amin'ny harafesina remover sy ny sarimihetsika-namorona fitaovana, dia afaka manafoana manala menaka amim-pahombiazana haingana sy mamorona ny harafesina sosona ny vy ambonin'ny, film miaraka ambonin'ny manana fitaovana fiarovana harafesina tsara vokany.
2, IC-R03 menaka Esory antirust ranon-javatra mainty rehetra ampiasaina amin'ny vy, miaraka amin'ny soa sy harafesina degreasing mahay fanesorana fahaizany.
3, ny metaly ambonin'ny fa rehefa avy mampiasa menaka IC-R03 Esory antirust ranon-javatra, izany dia manana hery eo amin'ny sisiny tsara horonan-tsary sy ny vy ambonin'ny. Hamainina mivantana dia afaka ny ho Mitifitra loko, tsy mila borosy besmear antirust primer, dia afaka manakana ny sarimihetsika latsaka eny ary afaka manatsara ny anti-harafesiny fanatanterahana ny loko horonantsary.
4, IC-R03 menaka Esory antirust no ranon-javatra atao amin'ny asidra malemy, dia tsy harafesiny ny hoditra, tsy mila mampiasa asidra ary rano hanasana azy. Raha tsy misy neutralization fitsaboana, mampihena ny vola lany amin'ny famokarana
IC-R03 menaka Esory antirust ranon-javatra mainty rehetra ampiharina amin'ny metaly
Color ho amin'ny mazava mavo volontany mangarahara rano
Specific hery misintona 1,10 ny 1.14.
hidiran'i ambaratonga 1
-Paharitry ny fotoana 1 ora latabatra maina, miasa 24 ora isan'andro
Fampiasana 40-60 grama / metatra toradroa
Use lamina Hamafa ny tanana / hantsana
Storage 2 taona
Package 25kg, 200gk / barika
7, harafesina fanesorana fahaiza-manao: 100 micron harafesina sosona rehefa avy hahavonto 2-15 minitra hafanana amin'ny efitrano tokony hesorina.
8, antirust fahaizana: rehefa avy fanodinana ny faritra ao amin'ny toerana ivelan'ny trano 5 ny 7 andro dia tsy harafesina, eo amin'ny dingana antirust vokany, eo ambanin'ny toe-javatra 'ny hamandoana ambony 85% ny 100 ora, tsy ho harafesina.
1, miankina amin'ny fomba Ampiasao ny ambaratonga ny harafesiny sy ny ambaratongam-harafesina ambaratonga, aza miala amin'ny mush ranon-javatra etỳ ambonin'ny.
2, amin'ny fahazavan'ny ny harafesiny lehibe zava-misy, dia afaka hampitombo ny hafainganam-pandehan'ny tanana borosy.
3, taorian'ny fanodinana, vy faritra mila tsaboina antirust miankina amin'ny halavan'ny fotoana antirust fitakiana.
4, Painting tokony aorian'ny vy faritra maina tanteraka.
Previous: Manganèse phosphate coating IC-2005
Next: Zinc phosphate coating IC-2001-1
Aluminum Passivation, Fanapahana Ary Metalworking tsiranoka, vidin'ny nanapaka Oil , Optical Glass Cleaning Agent , Degreasing Agent Fa Metal , Mild Alkaline Cleaner,